Wine and Personality2– Cellar Door Distribution
home / wine knowledge / Wine and Personality 2
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားတွေအလိုက် Personality ကိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ကျန်နေသေးတဲ့ ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားတွေအလိုက် Personality များအကြောင်းကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Riesling ဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေက လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့သူတွေလို့ ဆိုထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကို ခင်တွယ်တက်သူဖြစ်ပြီး အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုလည်း အမြဲပေးတက်သူပါ။
✅ Sauvignon Blanc
ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ အမြဲအထာကျကျနေတဲ့သူတွေအများစုက ဒီဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် Social ကျကျနေထိုင်တဲ့ type ပါ။
Pinot Grigio ဝိုင်အမျိုးအစားကို ကြိုက်နှစ်သက်သူကတော့ ယဉ်ကျေးလိမ်မာစွာ စကားပြောဆိုတက်သူပါ။ သူတို့နဲ့ စကားပြောဆိုရတာ လွယ်ကူအဆင်ပြေပြီး သူတို့က ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေပါ။
ဒီဝိုင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူ အများစုဟာ ဂန္တဝင်စာရေးဆရာတွေကို သဘောကျနှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေပါ။ ရင်နှီးခင်မင်ရတဲ့သူအနည်းငယ်နဲ့သာ ပေါင်းသင်ဆက်ဆံတက်ပြီး အရာရာ လေးလေးနက်နက် တွေးခေါ်တက်သူတွေပါ။
ဒီဝိုင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူအများစုကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေပါ။ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူတွေလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီဝိုင်ကို ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးအများစုဟာ ပန်းရောင်လေးတွေ ပါတဲ့ အသုံးအဆောင်လေးတွေကိုလည်း သဘောကျတက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားတွေအလိုက်ပြောပြပေးလိုက်တဲ့ သင့်ရဲ့ Personality တွေပါ။ ဒီထဲမှာ သင်နဲ့ ဘယ်အချက်လေးတွေက တူညီလဲဆိုတာ ပြောခဲ့ပေးပါဦး..
Cellar Door Distribution already shared the some tips of wines and personality since last week. So today, we will share the next some interesting tips about wines and personality based on wine grapes.
✅ Pinot Grigio
From the above tips, what would your personality?